Fakafaka: Aiza ilay kolontsaina malagasy ? | NewsMada
Mahay miray hina e ! Trano atsimo sy avaratra e !, Voin-kava-mahatratra e! Tanan-kavia sy havanana e ! Aza ny lohasaha mangi­na no jerena e ! sns ! Kolontsaina malagasy avokoa ireo fa tsy zava-baovao nentin’ny vahiny akory. Ankehitriny, mandalo fotoan-tsaro­tra ny firenena. Nankaiza avokoa ireo? Zary misongadina ny fanara­rao­­ta­na, ny tsindrio fa lavo… Sa ve miankina amin’ny zava-mi­tranga ny fampiarana sy ny fiainana ireny kolontsaina malagasy ire­ny? Na ihany koa, misy sokajin’olona natao iaina ao anatiny fa misy kosa ireo tsy te hahalala ny fisian’ireny fahendrena malagasy ireny?
Ny hamafin’ny fiainana no mahatonga ny kolontsaina sy ny fahendrena ary ny fomba malagasy tsy ho voahaja intsony, hoy ny sasany. Sao mba ny mifanohitra amin’izany no tokony ho izy? Efa fantatra izao fa sarotra ny fiainana ka maninona raha mifanampy? Rehefa mafy angaha ny fiainana dia ho foana tsy hisy intsony ny tody sy ny tsiny? Raha velona sy miaina ary mahazo harena vokatry ny alahelon’ny hafa angaha dia manjary tsy hiaran’ny tody intsony?
Misy amin’ny Malagasy ny mahasahy manampina ny masom-panahiny amin’izao fotoan-tsarotra izao. Tsy vitsy mihitsy aza ireo mivaro-panahy ka mahavita minia mikimpy manoloana ny tsy rariny sy ny tsy hitsiny. Ao ireo manararaotra ny fahatsoran’ny hafa ka mihevi-tena ho maranitra sy kinga saina. Mihevi-tena ho lahi­matoan-kevitra, tompon’ny fahalalana, sns. Ny mifanohitra amin’ izay anefa ny tena fahendrena malagasy.
… “Mbola hiverina amin’ny Malagasy ny maha Malagasy azy, atsy ho atsy”, hoy ilay mpanoratra malaza iray izay. Na tsy maha­fantatra ny ampitso aza ny rehetra, tsara ny manana fanantenana tahaka ity mpanoratra ity… Saingy, tsy ho tongatonga ho azy izany raha tsy misy ny ezaka hataon’ny tsirairay. Mifanentana, mifana­kalo hevitra, mampahafantatra io maha Malagasy ny Malagasy io.
… Aiza ilay kolontsaina malagasy? “Raha mbola tsy maty ao anatin’ny Malagasy ny fanahiny, tsy atahorana ny hahafaty ny kolontsaina malagasy”, hoy hatrany ny navalin’io mpanoratra malaza io. Ary raha sanatria ka very ilay fanahy fa tsy maty dia ahoana? Ny tsirairay, angamba, no mamaly izay!